မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ပြောပြရအုံးမယ် (၃) - ကုသိုလ်
Posted by mabaydar at 7:04 PM
သာဓု3ပါနော်Sis..I agree with you .
4/03/2014 7:33 PM
4/03/2014 7:48 PM
Thank you so much for your visit and kind comment... :D
4/03/2014 8:55 PM
Thanks... ခြေရာ ချန်ခဲ့လို့ အာဝါး....
4/03/2014 8:56 PM
Doing great! Sadu Sadu Sadu!
4/03/2014 9:45 PM
ကုသိုလ်လေးအတွက်ကို ဖတ်နေရင်းပီတိဖြာမိတယ် ညီမလေးရေ
4/03/2014 11:49 PM
သာဓု သာဓု သာဓု နောက်လည်း များများ ကူညီနိင်ပါစေ။ စကားမစပ် အမေက Ramsay Gordan ရဲ့ အမာခံ။
4/04/2014 1:58 AM
အအေးဘူးလိုက်ပေးတာ လေးစားပါတယ်ကွယ် တကယ် နေပူထဲ ထမင်းစားချိန် အပြေးလိုက်ပေးတာ .လုံးဝမလွယ်တာပါ ညောင်ပင်ကြီးထက်ကြီးတဲ့ effort ပါ မဗေဒါရေ
4/04/2014 3:49 AM
သာဓုပါ မဗေဒါရယ်... <3
4/04/2014 11:14 AM
အမျှ အမျှ အမျှ sis ရေ.... ကွန်မန့်ချန်ခဲ့တာ ကျေးဇူးနော်...
ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ.... စကာင်္ပူကိုလဲ လာလည်ပါအုံး...
4/04/2014 11:35 PM
ဟား ဟား... မဗေဒါလဲ Ramsay ကို ကြိုက်ပါတယ်... ကိုယ်ချက်တဲ့ဟင်း သူစားရင်တော့ ဘယ်လောက်တောင် ပြောခံရမလဲ မသိဘူး... ကြောက်တယ်... :D
4/04/2014 11:37 PM
Wine ပြောမှ ပိုတောင် ကျေနပ်သွားပြီ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... မလွယ်ပေမဲ့ မခက်ပါဘူး... စိတ်ကြည်နူးရတာနဲ့တင် တန်ပါတယ်...
4/04/2014 11:38 PM
အဲမဲ လာအားပေးတဲ့ ဆုမြတ်မိုး ကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...
အမြဲလို့ ရိုက်တာ အမဲ ဖြစ်သွားတယ်... sorry
4/05/2014 1:01 AM
4/06/2014 11:27 PM
သာဓု သာဓု သာဓု sis
4/08/2014 12:08 AM